Maizina ny ho avy
Tsy mbola nisy ohatra ity ! Tsy misy foana ny fisondrotry ny vidim-piainana isan-taona raha ny kajy ataon’ny mpahay toekarena. Tarehimarika ankapobeny ihany ireny, mahasahana lafin-javatra maro, arakaraka ny seha-pihariana telo, ka anisan’izany ny fambolena sy ny fiompiana, ny indostria, ny asa vaventy sy ny fanorenana, ny raharaham-barotra sy ny servisy, sns. Tsy mahay ny tombana toekarena avo lenta, ambony latabatra, kajy sy tarehimarika samihafa ny Malagasy maro an’isa, fa ny zavatra jifainy andavanandro ihany no fantany sy itarafany raha mivoatra ny fari-piainany na mihemotra.
Tena ilain’ny isan-tokantrano fantarina ny saram-pitaterana, ny vidin’ny vary, ny menaka, ny siramamy, ny saribao, ny hofan-trano, ny saram-pianarana ho an’ny zanaka. Hafarana avy any ivelany avokoa anefa ny 85%-n’ireo zavatra ilainy andavanandro ireo. Izany hoe tsy maintsy vidiana amin’ny vola vahiny.
Rehefa zohina anefa, tsy misy vahaolana azo tsapain-tanana avy any amin’ny mpitondra, mitobaka ny famatsiam-bola avy any ivelany, fa tsy tonga any anaty vilan’ny isan-tokantrano. Maizina ny hoavin’ny mpifidy sy ny Malagasy ankapobeny.